Malitegharia modulu Bluetooth nke Mac ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu njikọ | Esi m mac
Malitegharia modulu Bluetooth nke Mac gị ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu njikọ
Ikekwe ị nwere ọtụtụ ngwaọrụ ejikọrọ na Bluetooth kwa ụbọchị, ị nwere ike ọbụnadị icheta ya, n'ihi na ị jikọtara ha na nke mbụ ya, ha emebeghịkwa nsogbu kemgbe ahụ. Anyị na-ekwu maka ahụigodo, oke, trackpads ma ọ bụ okwu, n'etiti ndị ọzọ. Ma Ọ bụrụ na ha amalite inwe nsogbu njikọ, nke na-agaghị ekwe omume na Mac, ịnwere ike ịtọgharịa modul Bluetooth.
Tupu ịme usoro a, anyị na-atụ aro ka ị gbanyụọ elu nke ejikọrọ, ruo n'ókè nke iwepu ike, ma ọkụ eletrik ma ọ bụ ogidi ma gbanye ya ọzọ iji nyochaa njikọ ya. Ọ bụrụ na ọ naghị edozi ya, soro usoro ndị a.
Na mbụ, cheta na keyboard nke iMac ma ọ bụ Mac mini nwere ike ijikọ Bluetooth, yana oke ma ọ bụ Trackpad. N'ihi ya, ị ga-enwerịrị nnọchi nke akụkụ ndị a, na nke a site na njikọ eriri, n'ihi na n'oge a malitegharia ha ga-ahapụ offline. Ọ bụrụ n’ichebara nke a echiche, ị dịla njikere ịmalitegharịa.
Nke mbu akara Bluetooth ga-egosi na nchịkọta nhọrọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ya, ịkpọku ya ị ga-emerịrị usoro ndị a:
Gaa na Mmasị sistemụ.
Na mmapụta window, pịa na nhọrọ na-egosi na ala: Gosi Bluetooth na menu mmanya. Ihe akara ngosi Bluetooth kwesịrị igosipụta na taskbar.
Mgbe ahụ ị ga- kpọọ menu Bluetooth zoro ezo. Site na igodo Mgbanwe na nhọrọ (alt), pịa akara Bluetooth site na menu menu.
Hapụ igodo ahụ ma ị ga-ahụ menu ezoro ezo.
Nweta nhọrọ Mkpụcha.
Họrọ nhọrọ Tọgharia modulu Bluetooth.
N'ikpeazụ, Malitegharịa ekwentị gị Mac.
Ozugbo ịmalitegharịrị, nsogbu nkwukọrịta ọ bụla n'etiti ngwaọrụ kwesịrị idozi.
Nchịkọta Debug nwere nhọrọ abụọ ọzọ anyị ga-ekwu ugbu a na: Tọgharia ụlọ ọrụ ntọala na niile ejikọrọ Apple ngwaọrụ. Na nke a, weghachite ngwa Apple niile na ntọala ụlọ ọrụ. Ọ bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị, ma ọ bụrụ na i meela usoro ndị gara aga n'enweghị ihe ịga nke ọma.
N'ikpeazụ, Hichapụ ngwaọrụ niile, Ọ bara uru mgbe anyị chọrọ ịkwụpụ ngwaọrụ niile, n'ihi nsogbu njikọ ma ọ bụ jikọta ha na Mac ọzọ dị nso ma zere nnyonye anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Malitegharia modulu Bluetooth nke Mac gị ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu njikọ
Ahụigodo anaghị arụ ọrụ maka m, ma ọ bụrụ na òké. Kedụ ka m ga - esi ga - enweta menu debug ma ọ bụrụ na enweghị m ike pịnye (alt-option) n’akụkụ (Mee)?
Ma ọ bụrụ na nhọrọ Bluetooth efunahụ na ngalaba nhọrọ ????
Zaghachi Elena Fdez.
My imac na mberede deactivates Bluetooth na ọtụtụ oge a ụbọchị… ị maara ihe mere na-eme?
Zaghachi Andrés Saldarriaga
Bluetooth adịghịrị m pụtara, mana ọ naghị egosi m nhọrọ nbipu ya na thezọ mkpirisi, enwere ụzọ ọzọ?
Udochukwu Onyeka Onwenu dijo
Ehihie ọma enyi, ha gwara gị ihe ga-eweta nsogbu a? nke ahụ na-emekwa m.
Zaghachi na Norbey Felipe Lopez Avila
Ndewo, ọ na-ekwu Bluetooth B AVGHA EGO, mana ọ naghị egosi m nhọrọ nkwụnye, enwere ụzọ ọzọ? Daalụ
Zaghachi Luis Sanda
Ọ bụrụ na Apple anaghị eweta ngwaahịa ngwaike na Machị 27?